ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ ဦးနှောက်အကျိတ်ကိုအောင်မြင်စွာဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 11, 2019 Navarat Rungteeranon, M.D. Panu Nacharoong, M.D.
Joseph လေးရဲ့ မိခင် မ Sharon Khun Thida Paing မှ Joseph လေးရဲ့ ဆေးကုသမှုနှင့် အတွေ့အကြုံကို များကိုပြန်လည်ဝေမျှပေးခြင်း
အမေး – Joseph လေးရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို စတင်သတိထားခဲ့မိခြင်း
အဖြေ – ရောဂါလက္ခဏာများစတင်သတိထားမိတဲ့အချိန်ကတော့ သားလေးအသက် ၆ နှစ်ခွဲ ၇နှစ်မပြည့်ခင် အရွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအခုချိန်ထိမှတ်မိနေပါသေးတာက သားလေးကျောင်း စတတ်တဲ့အချိန် မေလလောက်မှာ သူ့ရဲ့ဦးနှောက်အကျိတ်လက္ခဏာများစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာတစ်ကြိမ် ကျောင်းမှာသူအန်တယ်။ အိမ်မှာတော့ မအန်ဘူးဆိုတော့ ကျွန်မတို့လည်းမသိခဲ့ပါဘူး။ တစ်နေ့ သားလေး ကျောင်းဆင်းပြီးအိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ သူကျောင်းမှာအန်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်မကိုပြောပါတယ်။ ကျွန်မတို့လည်း သားလေးကဘာများဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ ဆေးခန်းပြခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာတုန်းကတော့ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ရိုးရိုးသာမန် အစာမကျေလို့အန်တာပဲလို့ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့သူ့မှာအခြားလက္ခဏာများ ဖြစ်တဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ဘာတို့မရှိသေးပါဘူး။သူကကျောင်းမှာသုံးပတ်ဆက်တိုက်လောက်အန်တဲ့အတွက် ကြောင့်ကျွန်မတို့သားကိုနီးစပ်ရာ ဆေးခန်းမှာ သားလေးကိုသွားပြခဲ့ပါတယ်။ဆေးခန်းကဆရာဝန်များကလည်း ကလေးက စိတ်ဖိစီးမှုရှိတာကြောင့်လား အစာမကြေတာကြောင့်လားပေါ့။ ကျွန်မတို့သားလေးကအန်တယ်ဆိုတော့အစာအိမ်အထူးကုဆရာဝန်နဲ့လည်း တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတစ်လလောက်ဆေးခန်းသွားလိုက်ပြန်လာ လိုက်နဲ့ အချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်လကုန်သွားပြီး နောက်တစ်လ ဇွန်လမှာတော့ ကလေးကအန်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြိမ်ရေများလာပါတယ်။ပြီးတော့ကလေးကခေါင်းကိုက်တာပါစဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ထိဆရာဝန်များကလည်းဦးခေါင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့အကြံပြုခဲ့တာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့ဆေးခန်းသွားရင် မနက်ဖြန်သက်သာသလိုရှိပြီး သန်ဘက်ခါကျတော့ပြန်ဖြစ်နဲ့သုံးလလောက်အချိန်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့လည်းသားလေးဘာဖြစ်လည်းဆိုတဲ့ အဖြေကို မရှာတွေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သားကတဖြည်းဖြည်းခေါင်းမခံမရပ်နိုင်အောင်က်ိုက်တယ် အော်ငိုပါတယ်။ ကျွန်မတို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီး ဆေးရုံမှာ သွားပြခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ လက္ခဏာကတော်တော်လေးပြန့်နေပြီဆိုတော့ ဆေးရုံကဆရာဝန်ကြီးတွေက ချက်ချင်းဦးခေါင်းကို CT Scan ရိုက်ခိုင်းပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ CT Scan မှာဦးနှောက်အကျိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကျိတ်က ကင်ဆာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး။ သားက pressure အရမ်းတက်ပြီးခေါင်းလည်းအရမ်းကိုက်နေတယ်ဆိုတော့ Shunt အရင်ထည့်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ operation လုပ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်မတို့သားလေးကို ရန်ကုန်မှာပဲ Shunt ထည့်ခဲ့ပါတယ်။ သူဆေးရုံမှာ တစ်ပတ်နေရတယ်။
အမေး – သားငယ်အတွက် အကောင်းဆုံးဆေးရုံကို ရှာဖွေခဲ့ခြင်း
အဖြေ –Shunt ထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်မတို့လည်းသားလေးကို ဘယ်ဆေးရုံမှာ operation လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစတင်ရှာဖွေပါတယ်။ ဩစဩေးလျက ကျွန်မတို့အသိတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့မှာလည်း နိုင်ငံခြားမှာဆေးကုသဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတော့။ သူတို့လည်း သားလေးအတွက်ဘယ်ဆေးရုံအဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာ ဝိုင်းဝန်းရှာဖွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲစိတ်မှုပြုမယ်ဆိုရင် ဘန်ကောက်က ဆစ်မီတဝေ့ကလေးဆေးရုံကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ ရန်ကုန်ကို အမေရိကန်ကလာတဲ့ဆရာဝန်တွေခွဲစိတ်ပေးမယ်ဆိုကျွန်မတို့ကြားပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့လည်းအမေရိကန်ကဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ရန်ကုန်မှာပဲခွဲမယ်လို့စဉ်းစားပေမဲ့ အဆင်မပြေတာက ခွဲစိတ်ပြီးလို့ဓါတ်ကင်ဖို့နေရာက အဆင်မပြေဘူးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေက ပြောပြပါတယ် ခွဲစိတ်ပြီး ဓါတ်ကင်တာ က ရက် ၃၀ အတွင်းလုပ်တာကောင်းတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မတို့အနေနဲ့က ရန်ကုန်မှာဆိုရင် ၂ လ ၃လ လောက်စောင့်ရမယ်ဆိုတော့ အဆင်မပြေဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် နောက်ဆုံး ဆစ်မီတဝေ့ကလေးဆေးရုံကို လာဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
အမေး -ဆစ်မီတဝေ့ကလေးဆေးရုံရှိ ကလေးဦးနှောက်အာရုံကြော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့
အဖြေ –ဆစ်မီတဝေ့ကလေးဆေးရုံကိုရောက်လာတာနဲ့ ရောက်ရောက်ချင်းဆရာဝန်တွေက ဒီ case က emergency case ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး သေသေချာချာလေး ဂရုစိုက်ကုသမှုကိုပြုပေးပါတယ်။ သားလေးကခွဲစိတ်ပြီးအန်တယ်ဆိုတော့ ဒီကဆရာဝန်တွေက ရောက်ရောက်ချင်းနေ့မှာပဲ ဦးနှောက်အရည်ကိုပြန်ယူပြီးစစ်ဆေးမှုပြုပါတယ်။ Dr. Panu ကလည်းသားလေးကို ခွဲစိတ်မှုမပြုခင်မှာ သားလေးနဲ့ ကျွန်မတို့ကို လာရောက်အားပေးစကားပြောတယ်။ Dr. Panu က အရမ်းကို ဂရုစိုက်ပေးပါတယ်။ သူဘယ်လောက်ဂရုစိုက်သလဲဆိုရင် ICU ထဲမှာလည်းသားလေးရဲ့ အခန်းအအေးအပူအချိန်ကအစ လာပြီး စစ်ဆေးတယ်။ ဒီ အခန်းအအေးအပူချိန်ကမှ သားလေးအတွက်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အထိကို အသေးစိတ် ဂရုစိုက်ပေးပါတယ်။ ပြီးတဲ့နောက်မှာ ICU ထဲကနေ ကျွန်မတို့ အခန်းပြောင်းလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီမှာလည်း သူနာပြုတွေ အချိန်ပြည့်လိုလိုသားလေးကို အထူးဂရုစိုက်ပေးပါတယ်။ ညဘက်တွေမှာလည်း ၄နာရီခြားတစ်ကြိမ်လာရောက်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကတော့ သားလေးရဲ့ အနီးကပ်ဆရာဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ သားလေးရဲ့အသည်းစွဲ ဦးနှောက်အာရုံကြောဆရာဝန်မကြီး Navarat Rungteeranon , ဦးနှောက်အာရုံကြောခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး Panu Nacharoong က လိုလေးသေးမရှိဂရုစိုက်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ Navarat Rungteeranon ကနေ့တိုင်းလိုလိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူကအမျိုးသမီးလည်းဆိုတော့ သားလေးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင် ပြောပေးတယ်။ သားလေးကသူနဲ့ရင်းနှီးတာပေါ့။
အမေး -မိခင် မ Sharon Khun Thida Paing တစ်ယောက်သားငယ်လေးနာမကျန်းဖြစ်နေတာတွေ့တဲ့အခါ
အဖြေ –အမတို့အနေနဲ့ကလည်း ကလေးဆိုတော့အရမ်းစိတ်ပူတော့ဒီဟာမဟုတ်ဘူးလား..ဟိုဟာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးComplain အကြီးကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ သေးသေးလေးတွေ ခဏခဏတတ်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီက သူနာပြုတွေက ပြုံးပြုံးနဲ့ အမဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီ ဖြေရှင်းပေးပါတယ်။ သားလေးက ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံမှာ ၃လလောက်တက်ခဲ့ ရတော့ ဆရာဝန်ဆရာဝန်မတွေ သူနာပြုတွေနဲ့ရင်းနှီးနေပြီပေါ့နော်။ သူပြန်တော့မယ်ဆိုတော့အားလုံးကပွေ့ဖတ်ပြီး ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြ မိသားစုလိုပါပဲ။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ပြည့်စုံတဲ့နေရာကတော့ဘယ်နေရာမှမရှိဘူးပေါ့နော် ဒါပေမဲ့အမတို့ဆစ်မီတဝေ့မှာတော့စိတ်ချမ်းသာခဲ့ရပါတယ်။
Joseph လေးရဲ့ ဖခင် ကို Moses Liancuh မှ Joseph လေးရဲ့ ဆေးကုသမှုနှင့် အတွေ့အကြုံကို များကိုပြန်လည်ဝေမျှပေးခြင်း
အမေး -ဖခင် ကို Moses Liancuh တစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက် နှင့် ကျေးဇူးတင်စကား
အဖြေ –ရှေ့ဦးစွာကျွန်တော်တို့မိသားစုဘုရားသခင်ရဲ့ ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ ဘုရားရှင်ကတကယ်ကိုကောင်းမြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သားလေးဦးနှောက်အကျိတ်တွေ့တယ်လို့ကြားကြားရခြင်းမှာ ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးဆိုရင် သတိလှစ်သွားပြီးစကားတောင်မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးဟာလည်း ဘုရားသခင်ရဲ့အကာအကွယ်အစောင့်အရှောက်မှုနှင့် ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများဖေးမှကူညီမှုများကြောင့် သူပြန်လည်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုအတွက် ကျွန်တော်အားတင်းခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ရက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ရက်ဖြစ်ဖြစ် ဒီသားလေးအသက်ရှင်ရေးအတွက် ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်၊ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီး၊ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအားလုံးဟာ အဆုံးအထိတိုင် သားလေးကို ကျွန်တော်တို့ ကုသမှုများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတူတကွကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
သားလေးရဲ့ရောဂါကို ရန်ကုန်မှာကုသမှုခံယူမယ်ဆိုရင်တောင်ငွေကြေးမြောက်များစွာကုန်ကျမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်တို့အားလုံးသိပါတယ်။ ဘန်ကောက်ကိုလာမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးကုန်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့သားလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ဆစ်မီတဝေ့ကလေးဆေးရုံမှာ လာရောက်ကုသမှုပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပါတယ်။ ကုသမှုခံယူနေစဉ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားဆုမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအားလုံးဟာလည်းဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အာလုံးက ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ မေတ္တာပြကြတယ်။ သားလေးခွဲစိတ်ခန်းထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရမ်းကိုစိုးရိမ်ခဲ့ရတယ်။ သားလေးက ၅ လ – ၆ လနီးပါးသားလေးကစကားမပြောတော့ဘူး၊ လက်လည်းမလုပ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့အရမ်းကိုဝမ်းနည်းပြီးစိတ်ပူရတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် သားလေးရဲ့အခြေအနေကို ကြည့်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံ မှာလက်မြောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်များလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ လက်မြောက်အရုံးပေးလိုက်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ဆုတောင်းခြင်းနဲ့သွားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ရံမှာ သူအစားကျွန်တော်သာဖြစ်လိုက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေလည်းများစွာရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့မိသားစုအားလုံးကလည်း ကလေးဦးနှောက်အာရုံကြောခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး Panu Nacharoong ၊ ကလေးဦးနှောက်အာရုံကြောအထူးကုဆရာဝန်ကြီး Navarat Rungteeranon ၊ သူနာပြုများ ၊ ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံမှ ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။